အသားအရေကို ပုံမှန် Scrub လုပ်ခြင်းမှ ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေများရနိုင်မလဲ? – YANGON STYLE
အသားအရေကို ပုံမှန် Scrub လုပ်ခြင်းမှ ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေများရနိုင်မလဲ?
ကျန်းမာလှပတဲ့ အသားအရေကောင်းခြင်းကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ဆိုရင် Skincare ကိုဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။ အသားအသားအရေကို ဂရုတစိုက် ထိန်းသိမ်းတဲ့နည်းလည်းတွေထဲမှာ Scrubbing လုပ်ခြင်းကလည်းအရေးကြီးတဲ့ အခန်းကနေပါဝင်ပါတယ်ရှင်
1. ဖုန်နဲ့ အဆီတို့ကို အသားအရေ အတွင်းထဲ ထိရေရာက်စွာသန့်စင်စေနိုင်တယ်
2.အသားအရေကို ညစ်နွမ်းမှေးမှိန်စေတဲ့ အမဲစက်နဲ့ အမာရွတ်တွေကို ပျောက်ကင်းသက်သာစေတယ်
3. ချွေးပေါက်ကျယ်ခြင်း နဲ့ မကောင်းတဲ့အနံအသက်တွေကို သက်သာပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်
5. ဆဲလ်သေတွေကိုဖယ်ရှားပြီး အသားအရေကို တင်းရင်းနုပျိုစေရန် အထောက်အကူပေးတယ်
6. စိတ်ဖိစည်းမှုလျော့ပါးသက်သာကာ လန်းဆန်းစေတယ်
7. ဖြူစင်ကြည်လင်ပြီး စိုပြေချောမွတ်တဲ့ အသားအရေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်
Scrub လုပ်ခြင်းကို တစ်ပတ်မှာ နှစ်ကြိမ်မှနေ အများဆုံး သုံးကြိမ်အထိပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဂရုတစိုက်ပုံမှန်လေး အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် အထက်ပါ အသားအရေကောင်းခြင်းများကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ ပုံမှန်လေးအသုံးပြုရမှာဖြစ်တာကြောင့် ဓာတုပစ္စည်းကင်းဝေးပြီး သဘာဝပါဝင်ပစ္စည်းများဖြင့် ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Scrubများကို အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ ခြောက်သွေ့တဲ့အသားအရေပိုင်ရှင်များ နဲ့ Sensitive ဖြစ်သော အသားအရေပိုင်ရှင်များက ပိုမိုသတိထားပြီး Scrub ရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Scrub လုပ်မယ်ဆိုရင် ပထမဦးစွာ ခန္ဓာကိုယ်ကို ရေလောင်းပြီး ဆပ်ပြာမသုံးမှီအသုံးပြုရမှာပါ။ စက်ဝိုင်းပုံစံ ပွတ်တိုက်ပေးခြင်းက အထိရောက်ဆုံး scrubbing လုပ်နည်းလေးဖြစ်ပြီး ထိရောက်မှုမြန်ဆန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ လှပကျန်းမာတဲ့ အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက် Scrub လုပ်ခြင်း ကောင်းကျိုးတွေကို ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် …
#TT #Moro #Scrubbing